Sinogqozi lokukunikeza ukuvikeleka okusezingeni eliphezulu ngesikha usesikhathini noma kungathiwa uncamela lawo aziwa ngama- Applicator okanye lawo mathemponi aziwa ngama – Non Applicator okanye usebenzisa amaphedi/imisubelo,sinalokho okukulungele. Siyakuqinisekisa ukuthi sinezinhlobo ezahlukene zemikhiqizo lapha eNingizimu Afrika zezidingo zonke zokuhlanza zabesifazane.
Kumkhiqizo ngamunye wemisubelo yethu okungama- Maxi Thick, ama-Ultra Thin kanye nama Essential yonke yenzelwe ukubhekana nezidingo zakho, ukumunca ukuvuza okusezingeni eliphezulu, ukuba mnene iphinde futhi itholakale ngokwahlukahlukana ngokobude. Noma kungabe uncamelani, uzokuthola lokho okudingayo kwimikhiqizo yethu.
Ama Panty Liner/ Izivikela kungcola ezikhindini ezincane zangaphansi zabesifazane
Akulungele ukusetshenziswa ngesikhathi uqala ukuya esikhathini uze uyoqeda. Ama-Liner wethu angasetshenziswa futhi nsukuzonke ukuze uzizwe uhlanzekile futhi umnene.
Amathemponi akwa Lil-Lets ahamba phambili, adayisa ukwedlula wonke emakethe yase Ningizimu Afrika. Izinhlobo zethu zibandakanya imikhiqizo eyaziwa nge- Digital kanye ne –Applicator futhi iphinde ize ngokosayizi abangafani kusukela kokuncane okwaziwa ngama- Mini kuye kwamakhulu aziwa ngama- Super Plus.
Ama-Maxi thick enzelwe ukukunika ukuvikeleka kanye nokukhululeka agoqwe ngokotini othambile ukwengeza ubuntofontofo.
Amancane- Ama Mini
Thina kwa Lil-lets siyakuqonda ukuthi amantombazanyana asemancane anemizimba emincanyana anezidingo ezahlukene, ngakho yonke imikhiqizo yakwa Lil-lets eyaziwa nge Lil-lets Mini Purple yenziwe yama mncanya futhi yamifishanyana ukuze ikwanele kahle
Hlala ukhululekile usuku lonke nge Lil-lets gentle intimate. Ekahle ukuthi ungayisebenzisa ekuseni uma ugeza, Inamakha emvelo ahlala amahora angama-24. Iyasiza ukugcina I –PH yalezozindawo ezithambile isesimeni esikahle okanye esilingene ngokomgomo wezempilo, ikushiye unokuzethemba futhi noma kungathiwa usuku lukuphethe kanjani.